ညှိနှိုင်းမှုရောဂါ | USAHello | USAHello
လူတွေကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်ခက်ခဲအတွေ့အကြုံကနေ recover မညှိနှိုင်းမှုရောဂါဖြစ်ပေါ်. ဆရာဝန်များမကြာခဏဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်လျောညီထွေတဲ့ရောဂါရှိကွောငျးတှေ့.
“အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်း” တစ်ခုခုမှားယွင်းနေရှိကွောငျးနည်းလမ်. “သင့်အောင်လုပ်ခြင်း” ဒါဟာအခြေအနေအပြောင်းအလဲတစ်ခုဆိုလိုတယ်. ဖြစ်ရပ်တစ်ခု deadbeat ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါသင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အဘို့အခက်ခဲအခါညှိနှိုင်းမှုရောဂါ. စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်အချို့မှာဥပမာအသစ်တစ်ခုတိုင်းပြည်လှုံ့ဆျော, ဒါမှမဟုတ်လက်ထပ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံး, သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ဆုံးရှုံး, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကွယ်လွန်သည့်အခါ.
ရောဂါလက္ခဏာများကိုသင်နာမကျန်းမှုကြောင့်ရှိခံစားချက်တွေကိုနှင့်အပြုအမူများမှာ. သငျသညျအတွင်းညှိနှိုင်းမှုရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်နိုင်3ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပင်ပန်းကြမ်းတမ်းအဖြစ်အပျက်၏လအတွင်း. သို့သော်ညှိနှိုင်းမှုရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာများပုံမှန်အားဖြင့်ထက် ပို. ကြာရှည်မထားဘူး6လများ. ညှိနှိုင်းမှုရောဂါ၏လက္ခဏာများတချို့ရှိနေပါတယ်:
သင်တို့ကဲ့သို့ Feeling ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများမပွုနိုငျ
သင်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့သည်ဤရောဂါလက္ခဏာအချို့တွေ့ကြုံနေကြလျှင်, သင်ညှိနှိုင်းမှုရောဂါခံစားရစေခြင်းငှါ. သင်ရုံအခြားတိုင်းပြည်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့လျှင်ဥပမာ, သငျသညျဝမ်းနည်းမှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရပေမည်. သို့သော်သင်သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများမလုပျနိုငျအောငျသငျသညျဝမ်းနည်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရလျှင်, သင်အကူအညီရရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်. သင်ဆဲထက်ပိုမိုများအတွက်ဝမ်းနည်းနှင့်နက်ရှိုင်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားရလျှင်6လ, ဒီသာမန်မဟုတ်ပါဘူး. သင်သည်သင်၏စိတ်ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ရမယ်.